Ngwa nzuzo nzuzo 5 kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Ihe nzuzo kachasị mma nke 5 maka gam akporo
Android bụ sistemụ arụmọrụ maka smartphones nke kwụpụtara maka ịnye ọtụtụ nhọrọ nzuzo na nchekwa. Na nke a, a ghaghi itinye ihe ndi na - emeputa igwe na - agbakwunye na nhazi nke ha, dika Samsung na nchekwa ya, dika ima, ngwa nke i gha echekwa ma zoo faịlụ, foto, vidiyo na ihe ndi ozo. na ọ dịghị onye, ​​ma e wezụga gị, nwere ike ịnweta ha.
Nakwa. Playlọ Ahịa Google jupụtara na ọtụtụ ngwa lekwasịrị anya na nzuzo nke ekwentị mkpanaaka yana, ya mere, ndị ọrụ, na nchịkọta a ị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ndị a ma ama ma jiri. Lee, anyị na-ewetara gị 5 kacha mma nzuzo ngwa maka gam akporo.
Tupu ị gaa na ya, ọ dị mma ịmara na ngwa niile ị ga-ahụ n'okpuru ebe a bụ n'efu. Fọdụ nwere ike ịnye nsụgharị nsụgharị nke onwe ha ma ọ bụ atụmatụ dị elu na nke adịchaghị mkpa nke chọrọ micropayments dị n'ime. Agbanyeghị, ọ bụghị iwu na ị ga-akwụ ụgwọ ego ọ bụla maka iji ndị a.
1 AppLock - mkpọchi App
2 Ngwa mkpọchi
3 Zoo faịlụ na onyonyo nke onwe - ỌBIVR.
4 Calculator - Foto Vault zoo foto na vidiyo
5 Nchọgharị Nzuzo DuckDuckGo
AppLock - mkpọchi App
Anyị na-amalite mkpokọta a na otu n'ime ngwa kachasị dị iche iche na ụdị ya. App mkpọchi ma ọ bụ AppLock, dị ka nkenke na n'ụzọ doro anya kọwara na ya, bụ ihe nzuzo na nchekwa ejiri mee ihe iji gbochie ịnweta ngwa. Nwere ike tinye naanị ndị a na paswọọdụ nke enwere ike itinye n'ọrụ site na ụkpụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, usoro mmeghe ahụ na-emezigharị nke ọma, yana ọtụtụ isiokwu na atụmatụ ndị na-eme ka ịmalite ngwa dịtụ anya.
Ọ na - eme na ọtụtụ oge ndị enyi, ndị ezinụlọ na ndị maara anyị gwara anyị ka anyị kpọọ ma ọ bụ jiri ya dị iche iche, ma maka nke a, anyị ga - enye ekwentị mkpanaaka agbachi. N'ọnọdụ dị otú a, mmadụ nwere ike inye naanị ihe ọ tụrụ anya ya, mana ụfọdụ ndị ọzọ nwere ike iji ọrụ na ngwa ndị ọzọ aghara aghara na-enweghị nkwenye mbụ ma ọ bụ, ihe nwere ike njọ, nyochaa foto anyị na onyonyo anyị na gallery., na ozi nzuzo site na ngwa ngwa mmekọrịta. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji nwee obi iru ala, ụjọ na / ma ọ bụ ụjọ mgbe anyị na-agbazinye ekwentị anyị, yana ezigbo ihe kpatara ya, ebe ọ bụ na Enwere ọtụtụ ihe nzuzo nke, maka ezi ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe ọzọ, anyị achọghị ịkekọrịta, ma ọ dịkarịrị ntakịrị ka mmadụ hụ na-enweghị ikike.
Iji zere ụdị ihe a, AppLock bụ ebe ije ozi. Iji ngwa a, dị ka anyị kwurula, ị nwere ike igbochi ịnweta onye ọ bụla ị na-achọghị ịhụ ihe gị dị oke ọnụ, belụsọ ma ị nyere ha paswọọdụ ma ọ bụ onye ahụ achọpụta n'ụzọ ụfọdụ. Nwere ike igbochi ngwa dịka Gmail, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, egwuregwu dịka Fire Fire, Oku nke Ọrụ Mobile, PUBG na ihe ọ bụla ngwa ọzọ, gụnyere ndị nke usoro ahụ na ndị arụnyere arụnyere. Ọzọkwa, ị nwere ike hazie mkpọchi ụkpụrụ na-adịghị ahụ anya na-ahapụ enweghị Chọpụta mgbe ị na slide mkpịsị aka gị na ihuenyo.
Ọrụ ọzọ dị mma nke ngwa ọrụ a bụ zoo faịlụ dị ka foto na vidiyo, nke mere na naanị ị nwere ike ịnweta ndị a site na vault, nke dị n'ime ngwa ahụ. Iji nke a ị nwere ike ime ka onyonyo na vidiyo pụọ na ekwentị gallery.
N'oge ọ bụla ị nwere ike ịmeghe ngwa site na AppLock, ka ị ghara ịbanye ụkpụrụ mmeghe oge ọ bụla ịchọrọ imeghe ha.
Dika igbochi ngwa bu ndi kacha ewu ewu na ngalaba nzuzo na nche, anyi laghachitere ozo na, obu ezie n’adighi aputa inwe aha mbu niile, mana aha njirimara, odi mfe ma kwụ ọtọ. ọrụ ya na ihe ọma ọ ga-enye.
Ma ọ bụ na ngwa a na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ nke akọwapụtara, si otú a na-enye igbochi ohere ngwa etinyere na mbụ ngwa mkpọchi igbe. Na nke a, ị ga-abanye ụkpụrụ, pin ma ọ bụ paswọọdụ iji nweta ngwa ịchọrọ n'oge ahụ. Ihe ọzọ dịkwa ebube bụ na enwere ike ịgbakwunye usoro mmeghe site na mkpisiaka aka, yana ihe mmetụta dị iche iche maka nchọpụta (naanị ma ọ bụrụ na ekwentị nwere ya, n'ezie).
Ihe na-adọrọ mmasị na ngwá ọrụ a na-ewetakwa bụ na dị iche iche ngwa mkpọchi gburugburu na aghụghọ nwere ike etinyere ya, nke ị nwere ike ịhọrọ ma gbanwee n'oge ọ bụla na oge ọ bụla masịrị gị. I nwekwara ike igbochi ozi na oku na ngwa a, ihe nwere ike ịba uru dị ukwuu karịa otu.
Dị ka ọtụtụ na ihe fọrọ nke nta niile ngwa ọdịnala nke ya ụdị, ọ na-enye ohere igbochi nke na-elekọta mmadụ media na nzi ozi ngwa ọdịnala dị ka Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, Line na ndị ọzọ. Ọ na-akwado igbochi usoro ngwa dị ka igwefoto. N'aka nke ọzọ, ọ bụ otu n'ime ngwa ndị na-eji obere RAM na batrị, ihe dị ezigbo mkpa na ikpe ndị a maka nnwere onwe ka mma na arụmọrụ nke ekwentị ebe ọ bụ ngwa ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile na ndabere. Na mgbakwunye, ọ na-akwado ọtụtụ asụsụ, nke gụnyere, kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, Spanish na Bekee.
Developer: Ezigbo ngwa ngwa ngwa
Zoo faịlụ na onyonyo nke onwe - ỌBIVR.
Nke a nwere ike ịbụ ihe kacha mma na nzuzo na-ezo ngwa na gam akporo, site na mgbe dị anya. Ma ọ bụ otu n'ime ihe ndị a pụrụ ịdabere na ya, nchekwa ma dị irè maka "Dofuo" faịlụ site na ebe mbụ ha, nke mere na naanị gị nwere ike ịnweta ha wee hụ ha mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Ọrụ ya dị mfe ma dị irè. Ọ bụrụ na ịchọrọ faịlụ dịka foto, vidiyo na dọkụmentị (PDF, Okwu, Excel, wdg) enweghị maka onye ọ bụla na - ewe ekwentị gị, tinye ha na akpati ngwa ahụ ma, ozugbo ọ gasịrị na akpaghị aka, ha ga - adị ezoro ezo n'ụzọ zuru oke nke na ị nwere ike ịlele ha wee mee ha ihe ọ bụla ịchọrọ n'oge niile n'ime ya.
Iji nye gị echiche ziri ezi banyere otu o si arụ ọrụ, ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ị zoo foto, ọ gaghị apụta na gallery ahụ, nke bụ ebe foto niile na-adịkarị, mana na Ọ BIVRIV, nke, site na ụzọ, ị nwere ike ịnweta naanị site na itinye paswọọdụ ma ọ bụ kpọghee ụkpụrụ. Nke a bụ nchebe na nzuzo nke ngwá ọrụ a.
A na-ewepụ faịlụ niile, foto na vidiyo agbakwunyere na ngwa ngwa ahụ na ebe ngosi ọha na eze wee zoo ya site na iji ya usoro AES CTR, usoro nke izo ya ezo nke kwere nkwa inye nchebe nke, dị ka onye nrụpụta ahụ si dị, bụ otu nke ụlọ akụ ji ahụ maka nchekwa ndị ahịa ha, nke na-ekwu ọtụtụ.
Ọ bụrụ na ihe niile akọwapụtara bụ obere ma ọ bụ ihe ọ bụla na-atọ gị ụtọ, ihe ga-ekwe omume ịdọta uche gị bụ ọrụ FakeTresor. Nke a ga - egbochi onye ọ bụla manyere gị ị nweta vault ịbanye na ezigbo ya ebe ị nwere ugha fake, nke bụ nke ị ga-abanye iduhie. Njirimara a bara oke uru, na enweghị mgbagha, ọ na-atọ ụtọ.
Chedo foto vidiyo: EZIOKWU
Developer: agba anọ
Calculator - Foto Vault zoo foto na vidiyo
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ nchebe na nzuzo maka ekwentị gam akporo gị, Ngwa a "calculator" a, nke na-abụghị usoro ihe mgbako n'onwe ya, na-arụ ọrụ dị ka akpati iji chekwaa ma zoo foto gị, ihe oyiyi na vidiyo ị nwere na gallery ahụ ngwa ngwa, ngwa ngwa na mfe. Ọ na-eje ozi iji zoo ụdị faịlụ ndị ọzọ.
Iji nweta onye mgbako a, ị ga-pịa akara ngosi ngwa ma tinye ntụtụ, nke ga-abụ nha nha nke ị haziri na mbụ, wee pịa akara nha anya, nke ga-abụ «=». Ọ na-akwado iji akara mkpịsị aka aka dị ka usoro mmeghe.
Usoro ezoro ezo ma ọ bụ logarithm nke ihe nchekwa na ihe nzuzo a bụ AES, nke na-ekwe nkwa mkpokọta faịlụ niile, foto, onyonyo na vidiyo zoro ezo na ngwa a na-adọrọ mmasị.
Ọzọ ihe na-bụ-akpali nnọọ mmasị bụ na, ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ndị ọzọ mara na ị na-eji nke a ngwa, ị nwere ike zoo ya akara ngosi. Ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ na ọ nwere ihe nchọgharị weebụ nke na-anaghị ahapụ ụdị akara ọ bụla mgbe emechara nnọkọ ahụ. Ọzọkwa, maka izu ezu, ị nwere ike igbochi ngwa. N'ikpeazụ, ọ na-enye arụmọrụ nke ugha ụgha.
Ihe mgbako - zoo foto
Developer: Ịkụ azụ
Nchọgharị Nzuzo DuckDuckGo
E nwere ọtụtụ ihe nchọgharị dị na Storelọ Ahịa Play maka smartphones, ụfọdụ ndị a ma ama karịa ndị ọzọ, mana ole na ole bụ nke ịnye dị ka nchekwa siri ike na nzuzo dị ka Nchọgharị Nzuzo DuckDuckGo.
Ihe nchọgharị a na-ekwe nkwa nnọkọ nkeonwe nke na-anaghị ekwe ka nsuso ndị ọzọ. Ọ bụkwa ọrụ maka ịchọpụta ebe nchekwa echedoro maka ụbọchị nchọgharị dị mma, nke na - eme ya ezigbo nhọrọ ịfụfụ ụgbụ n'ụzọ dị jụụ na enweghị nchekasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe nzuzo kachasị mma nke 5 maka gam akporo
Realme 8: standardkpụrụ ọhụrụ nke bara uru maka ego
Esi arụkwa ekwentị gị